Aging Wine (Storage in barrel) – Cellar Door Distribution
Aging Wine (Storage in barrel)
home / wine knowledge / Aging Wine (Storage in barrel)
ဝိုင်တွေကို သိုလှောင်တဲ့အခါမှာ ဝက်သစ်ချစည်ထဲမှာ သိုလှောင်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဝက်သစ်ချစည်ထဲမှာ သိုလှောင်ရလဲဆိုတာကို ဒီနေ့ ဝိုင်ချစ်သူတို့အတွက် sharing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Winemaker တွေက ဝိုင်စပျစ်ကနေ စပျစ်ရည်ရအောင် Crashing Process ပြီးတဲ့အခါမှာ စပျစ်သီးအဖက် လေးတွေကို လိုသလောက်ထားပြီး ဖယ်ထုတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာ သေချာဖယ်ထုတ်ထားပြီးတဲ့ စပျစ်ရည်အသန့်တွေကို Fermentation လုပ်ပြီး Oak Barrel လို့ခေါ်တဲ့ ဝက်သစ်ချစည်တွေထဲမှာ အနည်းဆုံး ၃ နှစ်မှ ၄ နှစ် သိုလှောင်ထားရတာပါ။
တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဝိုင်စပျစ်အမျိုးအစားမျိုးစုံကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဝိုင်စပျစ်ရည် အမျိုးမျိုးကို ဝက်သစ်ချစည်ထဲမှာ အနည်ထိုင်အောင် နှစ်ကာလတစ်ခုကြာ သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းထားတာပါ။ ဝက်သစ်ချစည်ထဲက ဝိုင်စပျစ်ရည်တွေက အငွေ့ပျံပြီး အဲ့ဒီ ဝက်သစ်ချစည်ရဲ့ သစ်သားနံ့ သင်းသင်းလေးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ ဝိုင်ရဲ့ အနံံ့၊ အရသာ တွေကို ပေါ်လွင်လာစေတာပါ။
ဒီလိုသိုလှောင်ရခြင်းက ဝိုင်တွေရဲ့ အရသာကို ပိုကောင်းမွန်စေပြီး ဝိုင်ရဲ့သက်တမ်းကို ပိုကြာရှည်ခံစေပါတယ်။ ဝိုင်တစ်ပုလင်းရဲ့အသက်ဟာ ဝိုင်စပျစ်သီး မျိုးစိတ်ပေါ်မူတည်သလို၊ ဝက်သစ်ချစည်ထဲမှာ သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ကာလပေါ်လည်း မူတည်ပါတယ်။
ဝက်သစ်ချစည်မှာတောင် နှစ်မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်။ New Barrels နဲ့ Old Barrels ပါ။ ဝိုင်ဖြူတွေကိုတော့ ကာလရှည်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားစရာ မလိုအပ်တဲ့အတွက် New Barrels ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ သိုလှောင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဝက်သစ်ချစည်အသစ်ထဲမှာသိုလှောင်ခြင်းက ဝိုင်ရဲ့အရောင် နဲ့ အနံ့၊ အရသာတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြစ်ပေါ်လာစေလို့ပါ။
ဝိုင်နီကိုတော့ ဝက်သစ်ချစည်ထဲအဟောင်းထဲမှာ သိုလှောင်ပါတယ်။ ဝိုင်နီတွေက ဝိုင်ဖြူတွေထက်ပိုပြီး သက်တမ်းပိုကြာရှည်စွာ သိုလှောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အတွက် ဝက်သစ်ချစည်အဟောင်းထဲမှာပဲ သိုလှောင်ရင်း ဝိုင်ရဲ့ အနံ့၊ အရသာ၊ အရောင်တွေကို ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။
ဒါကတော့ ဝိုင်ကို ဝက်သစ်ချစည်ထဲမှာ သိုလှောင်ထိန်းသိမ်းတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကောက်နုတ်ချက်အချို့ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ရက်တွေမှာ ဒီထက်ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆက်ပြီး Sharing လုပ်သွားဦးမှာဖြစ်လို့ ဝိုင်ချစ်သူတို့က စောင့်မျော်ဖတ်ရှုပေးဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်။
Wines are stored in the barrels. So today Cellar Door Distribution’d like to share the excerpts of why wines are store in the barrels.
Many winemakers store and age different varieties of wine within oak barrels, as this improves the structure and body of the wine, while adding flavor from the oak. New barrels made from oak provide flavor to the wines stored therein for approximately 3–4 years, after which time the barrels become neutral. Aging wine in an oak barrel after it becomes neutral can still help to improve the wine by concentrating its flavors through the process of evaporation, which occurs by water content escaping from the barrel.
Wine structuring happens through the polymerization of tannin molecules. This process continues so long as the wine is within the barrel. Winemakers continue aging wine in an oak barrel for approximately 6–9 months to allow enough time for the wine to be in contact with the wood.
Barrels which are younger give off structure and flavor atafaster, stronger rate than do older barrels. Therefore, as the barrels themselves age, aging wine can be kept in them for longer periods of time without the oak flavor becoming too intense. American oaks release flavors more quickly than do European oak varieties.
White wines are often fermented in brand-new barrels. This is because white wines can absorb all the needed influence from the barrel in the fairly short time it takes for the wine to ferment, and white wines are, in general, imparted with less oak flavor than red wines. From there, the barrel goes on to be used for red wine aging because it will give off its oak flavor more slowly, and red wines needalonger fermentation and aging period to develop all the depth and flavor necessary.
Here are some excerpts of storing wine in the barrels.
Copyright ©2020 By CellarDoor Distribution | Designed by MTG